DORONIKUM: SHARAXAADDA, NOOCYADA, SAWIRRADA, BEERITAANKA, DARYEELKA, TARANKA - SOOSAARKA DALAGGA
Waxaan koraan doronicum
Boggagaaga waxaad mar walba dooneysaa wax dabacsan oo aan qabyo ahayn. Taasina waa sababta dad badani u doortaan dhirta raaxada ah ee qoyska Astrov. Mid ka mid ah noocaas waa jumaan huruud ah. Aan fiirino sawirada si faahfaahsan dhammaan marxaladaha beeritaanka iyo daryeelidda doronicum.
Tilmaanta iyo kala duwanaanta
Doronikum waa warshad gaaban oo ka mid ah qoysaska Astrov, oo sidoo kale loo yaqaanno caleemo huruud ah iyo kozulnik. Ubaxa wuxuu ku badan yahay buuraha ku yaala Eurasia. Duufaanku waa jaalle iyo siyaalo kale ayaa ah mid adag.
Xaashiyayaashu waa caan ku ah chamomile, waxayna yihiin kuwa wax lagu duubo oo ku wareegsan coryaanka loo yaqaan 'corymbose inflorescence' ee dhowr saf. Qeybta sare ee pedicel waa mid yar oo kabadal ah. In dabeecadda, faafin by abuurka.
Caleemaha waa qoryo-qaabeeya, qulqulaya dhamaadka, caday iyo cufan, caadi ahaan basal ama beddelaad, oo gaadhaya 12 cm dherer. Cudurka ayaa leh 40 nooc. Qaar ka mid ah waa:
Doronicum leopard (sun ah);
Noocyada si ficil ahaan looma kala duwanaantooda. Taasi waa midabka tufaaxa iyo dhererka dhererka, kaas oo u dhaxeeya 30 illaa 120 cm, ugu caansan waa qorshe, riwaayad iyo leopard.
Waa muhiim! Ha ku beerin kabo geedo hoostooda ama hooskii buuxa. Ma barooran doonaan.
Halkee laga gooyaa doronicum
Ariga ayaa kori kara wakhti dheer hal meel. Ubaxa wuxuu u baahan yahay boos yar, oo leh daryeel habboon, ma koraan. Dhirta si fudud waxay u habeysaa cimilada kala duwan oo si fiican u daadisa abaarta.
Goosta si fiican ula noocyo kala duwan ee dilka ah. Waxay noqon doontaa mid xiiso leh in la eego helopsis jaalaha ah ama garoon geedka digaaga, anafalis pearl supplement doronicum leh midab cad, iyo asaliga talyaaniga wuxuu ku dari doonaa sariirta sariirta inflorescences. Doronikum waxaa lagu beeray xuduudaha isku dhafan iyo xargaha alpine.
Waxaa laga yaabaa in aad xiiso u leedahay in aad wax badan ka barato ubaxyada, kuwaas oo sidoo kale ka mid ah qoyska Astrovye, kuwaas oo ku saabsan buzulnik, oreback, Nivyanik, osteospermum, cineraria, cosmian, goldenrod, ageratum, pyrethrum, coreopsis, liatris, gatsania.
Waa hagaagayaa ubaxyada qayb ahaan, sida qabow. Kaliya marka laga reebo waa noocyada qorshaha, kaas oo si gaar ah ugu qulqulaya qorraxda.
Doronicum koraya wuxuu bixiyaa ciidda bacrin ah, dabacsan, dherer leh. Ubaxa wuxuu leeyahay muuqaal xiiso leh: xididdada ayaa ku yaal meel u dhow lakabka sare ee carrada. Sidaa darteed, ciidda aan la qodi karin ama loosen.
Ciid iyo badeecada ku habboon. Qulqulku waa dhexdhexaad. Si loo yareeyo aysidhka carrada, waa ku filan in lagu daro dhagaxa dhallinyarada ah inta lagu jiro qoyaanka dayrta.
Goobidda iyo daryeelidda doronicum ee berrinka bannaan laguma daro wax kasta. Agrotechnology halkan waa isku mid sida ubaxa kale.
Geedka geedo lagu soo saaro maalinta cadceeda ah, waxaa ka mid ah diyaarinta godadka beerta (qoto dheer waa in la barbar dhigo cabbirka nidaamka xididka) iyo substrate, kaas oo ka kooban 2 qaybood oo ah compost, 2 qaybood oo ciid ah iyo 1 qayb oo ciid ah.
Ka dib markii si fiican u waraabiyey. Geedo waxaa la beeray dhamaadka May, tan iyo muddada ubax ee doronicum ku dhaco xagaaga xagaaga.
Ma taqaanaa? Noocyo badan oo ka mid ah qoyska Asterov ma haynin hantidooda markii la beeray abuurka. Sidaa darteed, waxaa fiican inaad iibsato alaabta dukaanka, halkaas oo soo-saaruhu uu mas'uul ka yahay ilaalinta dhammaan sifooyinka marka koraya laga bilaabo abuurka.
Kozulnik xaaladaha dabiiciga ah waxaa lagu faafiyaa abuurka. Waxay ka samaysan yihiin carpels ubax waxayna u eg yihiin abuurka løvetann. Waad ku soo dari kartaa xilliga dayrta, jarista fooriyooyinka ee hoos u dhacay.
Ka dibna samee isqurxinta miraha. Waxay ku ridaan qaboojiyaha ilaa 2-3 bilood. Guga hore, waxaad u baahan tahay inaad diyaariso sanduuq loogu talagalay geedo. Ciidda goobta beerto mustaqbalka ayaa ku haboon.
Ku darista bacriminta macdanta yaryar, waxaad u baahan tahay inaad abuurto abuurka. Daboolka waa inuu ahaadaa mid dabacsan, sidaa darteed geedo waxay heli karaan oksijiinka. Ka dib markii caleemaha koowaad, geedka waxaa la furay oo la waraabiyey qadar yar oo biyo ah.
Waxay ku xiran tahay heerkulka qolka hoose ee nalalka badan. Quusitaanka waxaa la sameeyaa marka warqadaha ugu horreeya ay ka muuqdaan caws dhalinyaro. U qabashada geedo ku jira weel gaar ah, waa lagama maarmaan in la adkeeyo, iyaga oo keenaya hawada furan. Tani waxaa la sameeyaa 7-10 maalmood ka hor inta aan lagu beerin warshadda dhul furan. Maalin kasta, waxaad u baahan tahay inaad kordhiso waqtiga degenaanshaha geedo wadada. Sidan ayaa loo isticmaali doonaa dhibcaha heerkulka yar yar iyo sii xoog.
Qeybinta baadiyaha waxaa la sameeyaa xilliga dayrta ama guga shan sano kasta. Bannaanka u khibrad badan ayaa ku talinaya in loo qaybiyo dakhliga ah dhamaadka ubaxiisa. Doronicum waa in si taxaddar leh loo qodo si aaney u waxyeeleynin xididada ugu weyn.
Kadibna waxaa lagu dhaqaa baaldi biyo ah oo la jarjarey haddii uu jiro qallafsan ama mid la mid ah.
Waa muhiim! Inta lagu guda jiro howsha, hubso inaad xididdada ka saartid. Haddii xididdada qoyan ee geedo yihiin isla markiiba transplanted, dhirta ayaa u dhiman doona qoyaan xad dhaaf ah.
Sida loo daryeelo doronicum
Ubax Cuntadu wuxuu ku haboon yahay kuwa si dhif u soo booqda goobta ama aad mashquul u tahay waxyaabo kale xagaaga. Ka dib oo dhan, ariga uma baahna daryeel gaar ah foomka bacarimiso ama biyo caadi ah. Daryeelka saxda ah, doronicum wuxuu ku jiri karaa wax ka badan hal mar sanadkii, halka dhanba waa mid aad u fiican.
Xilliga xilliga qalalan, chamomile huruud ah waxay u baahan tahay waraabinta 1-2 jeer toddobaadkii. Hubi in biyuhu aysan istaagin ama aadan ka boodin ciidda. Xaaladdan, suurtogalnimada in la horumariyo cudurrada fangas.
Guga, ka hor xilli sii kordhaya ee doronicum, sulfur-ka kooban iyo Bacriminta nitrogen-ka kooban Bacriminta (Diammofos, Crystallin) ayaa la soo bandhigay. Xilliga dayrta, uma baahna quudin dheeraad ah, sida inta lagu jiro xilliga sii kordhaya.
Waxaa jira noocyo kala duwan ee dhirta dilka ah ee budada. Nadaafada ayaa la qaban karaa wakhti kasta oo sanadka ah, haddii aad aragto jabinta dhirta (tani waxay si toos ah u khuseysaa guuldarada xayrta budada ah, marka caleemaha iyo afkaba laga saaro xididka).
Laakiin doronicum kaliya waxay u baahan tahay manjooyin dayrta, kaas oo lagu fuliyaa diyaarinta geedka jiilaalka.
Ma taqaanaa? Doronicum Colonna waxaa loogu magac daray Botanist Fabio Columns.
Meesha dabiiciga ah ee koritaanka dhirta waa buuraha, sababtoo ah raaxadu waxay u adkaysaa heerkulka hoose. Gubashada afkoda waa in lagu daboolaa wax la mid ah geedaha kale. Isla mar ahaantaana iska hubi in guga, marka barafku dhalaalayo, sida qoyaanka badan ee suurtogalka ah ay u dhacaan. Hawadu waa xaalada ugu weyn ee jiilaalka. Haddii kale, dhirta ayaa jabin doonta oo dhimanaya.
Dhirta Dheeriga ah waxay u adkeysanayaan cudurada iyo cayayaanka. Laakiin doronicum waxaa laga yaabaa in ay saameeyeen shinbiraha oo cuni doona caleemaha. Si looga hortago tan, mararka qaarkood waa lagama maarmaan in la baadho caleemaha ubaxyada iyo shaqsiyaadka shakhsi ahaaneed.
Iyada oo leh qoyaanka xad-dhaaf ah oo qoyaan leh budada ah. Si aad uga takhalustid hal bil, isticmaal fungicides ama daawooyinka dad kale. Isla mar ahaantaana, hubi deriskaaga doronicum. Ka dib oo dhan, waa cudur ka mid ah cudurka parasitic ku faafaan by dhirta mycelium. Doronicum waa mid ku habboon dadka jecel daryeeli kara, laakiin ubaxyo qurux badan. Diirada ugu yar waxaa lagu xaqiijin doonaa ubaxyada dhalaalaya ee jaalaha ah guga iyo xagaaga.